Vaovao - miaro ny fandriam-pahalemana maitso ny sivana fanadiovan-tena mandeha ho azy
Miaro ny fandriam-pahalemana maitso ny sivana fanadiovan-tena mandeha ho azy
Raha resaka maintso, ny ankamaroan'ny olona dia mieritreritra lohahevitra mazava toy ny fiarovana ny natiora sy ny tontolo iainana. Green dia manana ny dikan'ny fiainana amin'ny kolotsaina sinoa, ary koa maneho ny fifandanjan'ny tontolo iainana ekolojika.
Na izany aza, miaraka amin'ny fampandrosoana tsy tapaka ny indostria, ny maitso dia mihena amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta. Na ala maintso, oasis midadasika na renirano sy farihy mikorisa, ny fahalotoan'ny fako indostrialy dia mihena isan-taona. Ny mariky ny fiainana olombelona sy ny tany dia nivoatra maitso ka hatramin'ny mainty. Sivana fanadiovan-tena mandeha ho azy, fampiasa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana maintso nalaza, rehefa natomboka, dia toa mampiditra hery vaovao eo amin'ny fiarahamonina.
Miaraka amin'ny fihomboan'ny fahalotoan'ny tontolo iainana, nanomboka nijery tsikelikely ny olana ara-tontolo iainana ireo sampana miaro ny tontolo iainana mifandraika amin'i Shina. Mandritra izany fotoana izany dia nampidirina tsy tapaka ny lalàna sy ny lalàna momba ny fiarovana ny tontolo iainana mba hiarovana ny tontolo iainana sy ny renirano tsy ho simba indray. Ny lalàna sy lalàna mifehy fotsiny dia tsy mandeha amin'ny olona tsy mahalala lalàna loatra; Miaraka amin'ny fampidirana sivana manadio tena mandeha ho azy dia mihamaro ny olona mahatsapa ny fiarovana ny tontolo iainana ary miditra amin'ny laharan'ny fanaraha-maso ny fandotoana. Ny sivana mandeha ho azy ho an'ny fanadiovan-tena dia efa nisondrotra eny an-tsena nanomboka teo.
Ny antony mahatonga ny sivana mandeha ho azy amin'ny fanadiovana tena mandeha ho azy dia mandrisika ny fahafantaran'ny olona ny fiarovana ny tontolo iainana satria nahatratra vokatra maro tamin'ny fanaraha-maso ny fandotoana, fampihenana ny famoahana ary famokarana angovo.
Na dia sivana feno fanadiovana tena mandeha ho azy aza dia fitaovana filtration loharano amin'ny rano, ny vokany dia mitondra tombony amin'ny lafiny maro. Raiso ohatra ny fampiasana sivana fanadiovan-tena mandeha ho azy. Ny milina fanaovana taratasy dia ekena ho mpampiasa rano lehibe. Alohan'ny hampiasana ny sivana fanadiovana tena mandeha ho azy, ho tombontsoany vetivety, dia manala maloto be dia be ny orinasa nefa tsy misy fitsaboana, ka miteraka fahalotoan'ny renirano samihafa. Aorian'ny fampiasana sivana fanadiovana mandeha ho azy dia afaka mampihena mivantana ny fahalotoan'ny maloto amin'ny natiora izy io, ary ny kalitaon'ny rano voasivana dia azo omena ihany koa amin'ny ozinina hampiasaina indray, mampihena be ny fampiasam-bola amin'ny fidiran'ny rano. Maninona raha atao ny ozinina.
Ny sivana manadio tena mandeha ho azy dia toy ny sivana iray ihany, izay manala ny loto tsy misy fitoviana ao anaty loto, manome antsika planeta maintso.